२०१७ का बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन – Tech4Nepal
२०१७ का बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन
यो वर्ष बजारमा आउने भनिएका बहुप्रतिक्षित फोन यस्ता छन्:
१. एप्पलको आइफोन एट:
एप्पलले पहिलो पटक आइफोन सार्वज्निक गरेको यो वर्ष दश वर्ष हुनेछ । सन् २००७ मा एप्पलका संस्थापक स्टिभ जब्सले पहिलो आइफोन सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसैले कम्पनीले आइफोनको दशौँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा ल्याउने आइफोनको नयाँ संस्करण स्मरणीय तथा भव्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । कतिपय अनुमानहरुका अनुसार यो वर्ष एप्पलले सबै काँचले बनेको आइफोन ल्याउनेछ, जसमा मोडिएको ओएलइडी डिस्प्ले हहुनेछ । एप्पलले तिन थरी आइफोन एट ल्याउने बताइएको छ । ५.८ इन्च, ४.७ इन्च र ५.५ इन्च गरी तिनवटा भेराइटीका आइफोन एट आउने त्यसमध्ये ५.८ इन्चवाला आइफोनमा ओएलइडी स्त्रिmन रहने बताइएको छ ।
२. सामसुंग ग्यालेक्सी एस एट:
सामसुंगको नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस एट आउने हल्ला महिनौदेखि चलिरहेको छ । सामसुंगको दुईवटा भेराइटीमा एस एट आउनेछ । त्यसमध्ये एउटा स्मार्टफोनमा ५.१ इन्चको क्यूएचडी रिलोजुसन डिस्प्ले हुनेछ भने ५.५ इन्चको स्मार्टफोनमा फोर के रिजोलुसन तथा सुपर एमोलेड डिस्प्ले हुनेछ । दुबैमा क्वालकोम स्नापड्रागन ८३० प्रोसेसर तथा एक्जीनोस ८८९५ सिपियु रहनेछ । ग्यालेक्सी एस एटमा बिस्ट मोड हुनेछ । यो भनेको कित त अल्ट्रा ब्याट्री सेभिंग मोड वा ब्याट्रीको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने मोड हो । यो प्रविधिको प्याटेन्ट सामसुंगले दर्ता गराइसकेको छ ।
३. एलजी जि सिक्स:
आउँदो फेब्रुअरीमा स्पेनको बार्सिलोनामा हुने मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसका दौरान एलजीले नयाँ स्मार्टफोन जि सिक्स सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा विद्यमान जि फाइभको मोड्युलर डिजाइन हटाइनेछ । यसमा धातुको एकनासको बडी हुनेछ । ५.३ इन्चको डिस्प्ले तथा डुअल क्यामरा सेटअप रहनेछ । क्यामरामा वाइड एंगल लेन्स रहनेछ ।
४. वनप्लस फोर:
चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनीका लागि यो वर्ष वन प्लस फोर फ्लागसीप स्मार्टफोन हुनेछ । विद्यमान वलप्लस थ्री टी को नयाँ संस्करणको रुपमा वन प्लस फोर आउनेछ । कतिपयले भने कम्पनीले वन प्लस फोरको साटो सिधै वन प्लस फाइभ नामबाट स्मार्टफोन ल्याउने अनुमान पनि गरेका छन् ।
५. गुगल पिक्सेल टू:
यो वर्ष बजारमा देख्न पाइने अन्य दुई स्मार्टफोन चाहीँ गुगलका पिक्सेल तथा पिक्सेल एक्सएल स्मार्टफोन हुन् । सेप्टेम्बर महिनामा सार्वजनिक गरिएका गुगलले आफैं बनाएका यी स्मार्टफोनले गुगलको नेक्सस सिरिजका स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए र स्मार्टफोनको ब्याकमा गुगलको लोगो राखिएको थियो । अब गुगलले यो वर्ष चाहीँ गतवर्षका दुई स्मार्टफोनको नयाँ संस्करण पिक्सेल टू र पिक्सेल टू एक्स एल ल्याउनेछ । यी दुई स्मार्टफोनमा स्नापड्रागन ८ सय ३५ प्रोसेसर रहने बताइएको छ । एजेन्सी
Previous Previous post: How To Wirelessly Charge Your iPhone 7
Next Next post: Engineers work on promising new memory technology